Manomboka ny fiainana ny toro-hevitra matahotra ny hanao ny fanapahan-kevitra diso — Ahoana no hahatonga ny fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra ny fanohanana ny fanapahan-kevitra sarotra, Nahoana isika indraindray, mba hahatonga ny fanapahan-kevitra. Inona no azontsika atao mba hanamora ny fanapahan-kevitra dingana. Inona no atao raha matahotra ny hanao ny fanapahan-kevitra. Inona no atao raha toa ka tsy afaka manapa-kevitra. Ny valin ireo fanontaniana ireo dia mety ho hita ao amin’ity lahatsoratra ity. Sary Fotolia Ny fiainana ny lalana rarivato amin’ny fanapahan-kevitra. Misy lehibe sy kely, dia ny fahazavana sy ny mavesatra ny fanapahan-kevitra, dia tsy maintsy manao. Tsy maintsy manapa-kevitra ny hanambady na mba hiaina toy ny Tokan-tena, mba hanan-janaka na mba ho mbola tsy manan-janaka, ny hifindra any amin’ny firenena na miaina ao an-tanàna, hanorina trano na hanofa ny trano, sns. nanova ny fiainany ny toe-javatra toy ny fisotroan-dronono, ny fahafatesan ny mpiara-miasa, na ny fahasalamana ny fahasimban’ny, dia mitaky fotoana sy ny indray, ny fomba fiainana ny hiaina izany sy ny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra fa tsy mangataka andro, na tsy dia fanapahan-kevitra iray — izany hoe, ny fanapahan-kevitra ny handao ny zava-drehetra toy izany. Ny olona sasany dia mahita izany ho mora ny manapa-kevitra, ny hafa mandeha, indray andro, volana na taona maro mihitsy aza mba bevohoka, mandra-manao fanapahan-kevitra. Ho an’ny ankamaroan’ny olona, dia nahita fa ataony amin’ny taona ary sarotra kokoa ny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra ireo dia mora, raha iray Hafa mazava tsara ny manana tombony kokoa noho ny hafa. Ny fanapahan-kevitra dia sarotra, raha toa ka samy Hafa manana tombony sasany, ary tsy misy soa ireo mazava tsara. Tsy misy safidy tsara indrindra. Raha toa ka tsy misy safidy tsara indrindra, dia ny Tahotra hiakatra isika, dia afaka manao fanapahan-kevitra diso, ho antsika voka-dratsy. Ao ny raharaha ny fanapahan-kevitra izay dia ho sarotra ho antsika, dia matetika isika no mahita ny toa azo antoka indrindra safidy: Dia hifidy ho an’ny Hafa isika manantena ny kely indrindra voka-dratsy eo amin’ny lafiny azo antoka. Ohatra, raha toa ianao eo amin’ny Asa mifidy ianareo dia liana amin’ny roa tonta, — ny ao an-kanto eny an-tsaha, ny hafa any amin’ny banky, dia be dia be ny lafin-javatra ao amin’ny hilalao ao amin’ny (marina) safidy ny andraikitra. Asa ao amin’ny sehatry ny banky dia tsy fampanantenana azo antoka, ary angamba aza ny fidiram-bola ambony, ny Asa ao amin’ny zavakanto an-tsaha. Raha toa ka fiarovana ara-bola no tena zava-dehibe ho anareo, dia manapa-kevitra mety ho an’ny amin’ny sehatry ny banky. Izany dia mety ho ara-bola safidy tsara. Angamba ianao te ho tonga fa rehefa afaka taona vitsivitsy ao amin’ny banky ny maharary fahatongavan-tsaina fa ny Banky Asa dia mankaleo, saina sy mahafa-po. Ianao mahazo tsara, fa ny vidiny dia avo. Izy ireo dia be velona avy ny lafiny kanto. Dia tsy hanenina ianao ny fanapahan-kevitra. Toy izany koa ny soa aman-tsara ny safidy dia eo amin’ny fahafaham-pon’ny tena manokana ny asa, fa amin’ny farany dia tsy safidy tsara. SOSO-kevitra: manontany tena raha marina izany, dia mikasika ny fiainana sy ny fahafatesana. mety ho tena loza raha ny fanapahan-kevitra mampiseho fa diso. Ahoana no afaka mandeha amin’ny fiainanao. SOSO-kevitra: Raha toa ianao miezaka mba ho azo Antoka eo amin’ny lafiny (jereo ny ohatra etsy ambony), avy eo dia manontany ny tenanao: Dia ahy ny (ara-bola) ny fiarovana dia tena zava-dehibe izany aho dia te handray manokana ny fatiantoka na ny fahafaham-po ny tena manokana ny fironana sy ny zavatra mahaliana dia manan-danja kokoa ho ahy. SOSO-kevitra: Resaho amin’ny namanao — tsara amin’ny toy izany, ny fanapahan-kevitra mba ho feno hafaliana ny fanahinao. Amin izany fomba izany, afaka manao bebe kokoa hevitra sy manohitra ny fanapahan-kevitra. SOSO-kevitra: izany dia Manampy ihany koa ny hevitra sy manohitra ny fanapahan-kevitra amin’ny tsanganana roa, dia soraty eo akaikin’ny tsirairay, ary avy eo, amin’ny alalan’ny manisa, na ny hevitra na manohitra azy dia mavesatra noho ny. SOSO-kevitra: Manantena tsy misy tena fanapahan-kevitra tsara. Tsy clairvoyant ary tsy afaka mahita ny ho avy. Diso ny fanapahan-kevitra dia tsy azo ialàna, satria isika tsy manana ny fampahalalana rehetra noho ny fanapahan-kevitra tsara. Ary na inona na inona (mbola marina) fanapahan-kevitra samy manana ny tsara sy ny voka-dratsy fa ny tsara-panahy sy ny fahafaham-po. SOSO-kevitra: Raha toa tsy maintsy nanao fanapahan-kevitra, dia tsy tokony hanao izany intsony ny resaka. Ianao hoe: ao anatiny: atsaharo. Dia nieritreritra aho amin’ny alalan’ny rehetra ny fanehoan-kevitra, ary izaho dia hanao izao. SOSO-kevitra: Mamelà ny tenanao, raha misy fanapahan-kevitra eo amin’ny hindsight, toy ny unfavourable na ratsy. Hoy ianao: izaho tsy nanao ny fanapahan-kevitra ho afa-maina. Ny rehetra dia afaka mitondra any amin’ny traikefa, nihevitra aho. Nataoko ny Tsara indrindra mba hanao fanapahan-kevitra tsara. Tsy afaka mahita ny ho avy sy ny rehetra ny vokatry ny fanapahan-kevitra tanteraka ny hijery. Hoeritreretiko ny ankehitriny, ny fomba hanaovana ny Tsara indrindra avy amin’ny toe-Draharaha. Dia mirary anao ny hery mba hahatonga ny fanapahan-kevitra tsara sy ny herim-po mba hanaiky ireo izay efa hita ao amin’ny jery todika ho sarotra aza. Misaotra anao noho ny fanarahana ahy Ny fotoana karama. Hatramin’ny taona aho ny hanampy ny olona hiatrika olana manokana. Ny mizana ny matihanina ny asa, hitako ao Tavaratra Mandeha, Fisaintsainana, Jin Shin Jyutsu sy ny fanaova-mofo matsiro, mofomamy sy mofomamy.
Amboadia aho nijoro teo anoloan’ny tena lehibe fanapahan-kevitra, ny hetsika avy any Avaratra ho any atsimon’i Alemaina taorian’ny taona maro tany Avaratra. Izaho taona aho avy any Alemaina. Izany no ho tanteraka vaovao no manomboka. ‘ve vakio ny sasany ny fanapahan-kevitra ny SIDA, sy hahita azy ireo manampy.
Efa liana amin’ny Gazety.
MfG Sigrun, izaho dia miandrandra ny tsara handrisika. Afaka ny ho»hafa»mba ho tsara ny»mpanolotsaina»sy ny»mpanampy», fa na dia afaka manapa-kevitra, indraindray, sarotra ny hanosika na Izay antontan-taratasy ny raharaha, raha toa ka tsy maintsy nanao fanapahan-kevitra, dia tonga saina fa nalahelo ny teboka manan-danja, ary noho ny antony tsy mitondra, ny fanapahan-kevitra hanova mba hahatonga. ohatra, ao ny raharaha ny fanoloran-tena ho an-trano, satria ny fotoana fanerena, tsy ny rehetra ny hevitra manan-danja mety ho voamarina. Ny hitsambikina ny Hafa, dia sarotra: tsy dia be, satria tsy maintsy bump ho olona iray ny lohany, saingy noho ny tahotra dia ny hoe ny Hafa ihany koa ny tampoka tsy misy dikany drawback dia izay efa miraharaha azy. Aho mahita ny lahatsoratra tena manampy, fa izany dia tena sarotra ny hanao ny fanapahan-kevitra, isaky ny fanajana (na manokana na teo amin’ny sehatry ny asa. Mba hahatonga ny fanapahan-kevitra ihany koa dia midika ho fiovana, na tsara na ratsy. LG niala ny Tanin ny ririnina aho, dia nahazo ity boky ity avy amin’ny mpitsaboko aho soso-kevitra, noho ny olana ny fahakiviana, fanahiana, ny tonga lafatra, sy atao afa-tsy ny hoe: — antsoiko hoe azy manokana ny Baiboly. Efa fantatra izany matetika ao amin’ity boky ity sy izay irery no nanampy ahy kokoa. Fahazoan-dalana ny marary, ny PAL mpitari-dalana, satria efa fampahalalana manan-danja ny fitsaboana manohana fomba. Eo am-piandrasana ny fitsaboana toerana, ny boky dia tena manampy. Misaotra anareo noho ny mitsidika.
Manantena ny hihaona aminao tsy ho ela indray
Hafainganam-pandeha Mampiaraka →